Ngwunye mkpuchi maka windo ákwà mgbochi Rome | Ọrụ On
Ihe mkpuchi ihe mkpuchi maka windo ndị Rom
Alicia tomero | 16/11/2021 12:53 | Emelitere ka 18/11/2021 09:36 | .Chọ Mma
The kpochapụwo ákwà mgbochi Ha bụ akwa akwa ndị ahụ buru ibu, na-edozi, na-agbanwe agbanwe nke na-ekpuchi windo na akụkụ nke mgbidi ahụ. Ọ bụrụ na ike gwụrụ gị nke ákwà mgbochi, ebe a anyị na-atụ aro ka ị nweta uru kacha mma nye ya n'ụzọ zuru oke ma mara mma. Ụdị ihe mkpuchi a na-ekpuchi naanị obere windo ahụ ma mee ka ọnụ ụlọ ahụ bụrụ ebe dị jụụ na ebe ntụrụndụ.
Ọ bụ ezie na ihe niile kpuru ìsì nwere ike ịdị ka otu, na tiori, ha dị nnọọ iche na ọdịdị na uru. Anyị nwere site na mpempe akwụkwọ mpịachi, igbe ha dị n'elu ma bulie ákwà mgbochi ahụ mgbe a na-apịaji ya. Ma ọ bụ anyị na-anakọta kpuru ìsì nke akpa ebe ha na-adịghị apịaji dị ka ndị gara aga. Ya mbụ na anakọtara imewe ga-eme ka ọnụnọ bụ nnọọ eke. Anyị nwere ike ịchọta ya ngwugwu blinds , mere na àgwà, nke mbụ klas ihe na mere ka tụọ.
1 Kedu ka m ga-esi họrọ ụdị ákwà mgbochi?
2 Ngwa na agba maka paqueto blinds
3 Kedu ka esi atụle ma debe ihe mkpuchi ekpokọtara?
Kedu ka m ga-esi họrọ ụdị ákwà mgbochi?
N'ezie, a hapụla gị obi abụọ ma ị ga-ahọrọ ákwà mgbochi buru ibu ma ọ bụ ihe mkpuchi, nke e ji ihe eji arụ ọrụ tụọ ihe. Ọtụtụ n'ofè omenala blinds, anyị nwere The paqueto ma ọ bụ 'Roman ákwà mgbochi' dị ka a revolutionary, ma kpochapụwo ákwà mgbochi ịke, ebe ọ na-enye a na-ekpo ọkụ ọnụnọ na zuru okè luminosity.
Ọ bụrụ na ị na-achọ ihe mkpuchi ngwugwu, anyị nwere ụdị ákwà mgbochi a ihe na-agbanwe agbanwe nke na-adịghị akpụ akpụ, ebe mgbe akwa gị akwa, ọ na-apịaji ndammana. Mgbe ákwà mgbochi ahụ kpuchiri ọzọ, akwa ya na-alaghachi na ọnọdụ mbụ ya na-enweghị ezughị okè ọ bụla. Ọ dị mkpa naanị maka ntinye ya obere mkpanaka nke a ga-ejikọta ya na nko abụọ ka ọ dị mma nke ọma n'elu windo ahụ.
Ihe na-ekpuchi anya Ọ na-amasịkwa m nke ukwuu, ebe ọ bụ ihe dị ka ákwà mgbochi siri ike nke ukwuu, nke ejiri ihe ndị na-enye ohere ka ìhè gafere ma ọ bụ kpachie ya kpamkpam. Usoro ya na-arụ ọrụ na tube nke a ga-etinye n'elu mgbidi na ebe a ga-apịaji ákwà mgbe ịchọrọ ikpughe windo.
Ngwa na agba maka paqueto blinds
Nyere ọdịdị ya na nhazi ya, ụdị nke paqueto na-ekpuchi anya ma ọ bụ ' ákwà mgbochi Rome' a na-emepụta ya na akwa akwa zuru oke na e mere ka ọ ghara wrinkle. Na mgbakwunye, a na-emepụta usoro ya ka ọ ghara ibu mkpara na akwa ya na-anakọta ndammana site na mgbanaka na site n'enyemaka nke eriri. Ịdọpụ eriri ma ọ bụ eriri a ga-ebuli ákwà ahụ n'onwe ya, dị ka a ga-asị na ọ bụ ebili mmiri. N'ụzọ dị otú a, ákwà ahụ ga-enwe ọdịda dị nnọọ ọkụ nke ákwà ya ma na-enye nkwụsị ọkụ na-enweghị oke ọkụ.
Ihe kacha mma eji eme ihe bụ linen dị ka ọ na-enye nnukwu nguzogide. Ọ bụ ezie na a na-emepụtakwa akwa akwa dị ka kwaaji, ejiri ya mee ya akwa akwa na 50% polyester. Enwere ike ịsacha ha niile na oke okpomọkụ nke 30 Celsius yana ohere nke ikpocha akọrọ, ma jiri nlezianya mee ihe. Ha nwere ike were ironed na kacha okpomọkụ nke 110 Celsius. Enwere ọtụtụ agba iji jikọta nke ọma na ụdị gị na ime ụlọ gị.
Kedu ka esi atụle ma debe ihe mkpuchi ekpokọtara?
Iji nwee ike ịzụta kpuru ìsì omenala ị ga-eme nke ọma nha. Na ibe ha, ị nwere ike ịgbaso usoro ndị a ngwa ngwa ma jupụta igbe ndị a ga-eme. Usoro ya adịghị mgbagwoju anya, mana ọ ga-adị ezigbo mkpa na a na-ahụ ya nke ọma nakwa na a na-agbaso ntụziaka ndị egosipụtara. Ọ bụrụ na windo enweghị mgbidi n'akụkụ, a na-atụ aro ka ịgbakwunye obosara nke windo gbakwunyere 10 cm maka akụkụ ọ bụla.
Ọ bụrụ na ọ dị iche bụ akụkụ abụọ nke windo ahụ, mgbe ahụ, ị ​​ga-atụle obosara nke windo na wepụ 1 centimita n'akụkụ ọ bụla. Ọ bụrụ na ọ bụ naanị otu akụkụ nke windo na-amachi ya n'ihi na e nwere mgbidi ma ọ bụ ogidi, a ga-agbakọ obosara nke windo ahụ. gbakwunyere 10 cm site n'akụkụ hapụ ya ka ọ pụọ n'efu.
para tụọ ogologo ndị ìsì ị nwere ike were dị ka mmalite nke oke uko ụlọ na ebe ịchọrọ ka ọ gaa ala nke ndị ìsì. Ị ga-eburu n'uche ihe mgbochi niile ị nwere ike izute n'ụzọ gị, ma ọ bụrụ na ọ ga-adị mkpa ịme ụdị mgbakwunye ma ọ bụ nhazi.
Ihe mkpuchi ngwugwu mara mma ma dị irè, nwere ụdị dị iche iche na aro dabere n'ụdị ịchọrọ maka ọnụnọ gị. Mma nke ihe mkpuchi ngwugwu ndị a nke anyị họọrọ bụ na ha na-echebe site na oke ọkụ, na-enye nzuzo ma bụrụ ihe okike na anya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Crafts Na » Crafts » .Chọ Mma » Ihe mkpuchi ihe mkpuchi maka windo ndị Rom
5 Christmas ịchọ mma crafts
Crafts iji chọọ ụlọ mma na mbata nke oyi
Nata uzo ohuru na uzo di n’ime email gi.